ချောင်းဆိုးသွေးပါရောဂါ – ဤအချက်များက သင့်အားရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမည်ဖြစ်သည် – Shwehealth.com
ချောင်းဆိုးသွေးပါရောဂါ – ဤအချက်များက သင့်အားရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်
7. ဇှနျ 2016 8. ဇှနျ 2016
တီဘီရောဂါဟု လူသိများသော ချောင်းဆိုးသွေးပါရောဂါသည် ရောဂါရှိသူ စကားပြောသောအ ခါ၊ ရယ်သောအခါနှင့် ချောင်းဆိုးသောအခါများတွင် လေမှတဆင့်လွယ်ကူစွာ ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းရောဂါသည် Mycobacterium tuberculosis ခေါ်သော ပိုးတစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ် ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် သေဆုံးမှုအများဆုံး ရောဂါပိုး များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားသူ သန်း ၁၅၀၀ အထက်ရှိပြီး ယင်းတို့အ နက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆေးယဉ်ပါးအဆင့် ရောဂါများဖြစ်သည်။
ဦးစွာဖြစ်သော တီဘီ၊ ဦးစွာပြီးနောက် ဖြစ်သောတီဘီ၊ အဆုတ်တီဘီ၊ အဖုအပိန့်ဖြစ်သော တီဘီ၊ ဦးနှောက်မြှေးတီဘီ၊ မျိုးပွားအင်္ဂါနှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းတီဘီ၊ အရိုးတီဘီ၊ အရေပြားတီဘီ၊ ၀မ်း တွင်းမြှေးတီဘီနှင့် လျင်မြန်၍ပြင်းထန်သော နှလုံးဖုံးအမြှေးရောင်ရမ်းခြင်းတီဘီ စသည်ဖြင့် ရောဂါအ မျိုးအစားပေါင်းများစွာရှိသည်။ ယင်းတို့အနက် ဦးစွာဖြစ်သောတီဘီသည် အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သည်။ တီဘီဖြစ်ပွားမှုနှင့် လွှမ်းမိုးမှုသည် အစိုးရဆေးရုံများနှင့် အချို့ဆေးခန်းများတွင် အခမဲ့တီဘီဆေးများ ရရှိနိုင်သည့်တိုင် နိုင်ငံတ၀ှမ်းတွင် မြင့်တက်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ တီဘီရောဂါကူးစက်ခြင်းမှ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ထကြွတီဘီရောဂါရှိသူများနှင့် နီးကပ်စွာမနေခြင်း
တီဘီရောဂါသည် အလွန်လွယ်ကူစွာကူးစက်နိုင်သောကြောင့် ထကြွတီဘီရောဂါရှိသူများနှင့် နီးကပ်စွာမနေသင့်ဆိုသည်မှာ အသေအချာလိုက်နာသင့်သောအရာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဆေးစစ်မှုများအရ ငုပ်နေသော တီဘီရောဂါရှိနေသည်ဟု တွေ့ရှိထားရပါက ယင်းအချက် ကို ပို၍ လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့် ပူနွေး၍ ရှုပ်ပွနေသည့်နေရာများတွင် တီဘီရောဂါရှိသူ လူနာများနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ မနေသင့်ပေ။
(၂) သင်၏ကူးစက်နိုင်ချေကို သိအောင်လုပ်ထားပါ
အချို့သောသူများသည် အခြားသူများထက် ပို၍ တီဘီရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ပိုများသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ထိုသူများမှာ HIV စသော ရောဂါများကြောင့် ကိုယ်ခံအားနည်းနေသူများ၊ ထကြွတီ ဘီရောဂါသည်နှင့် နေရသူ၊ စောင့်ရှောက်ရသူများဖြစ်သည့် ဆွေမျိုးနီးစပ်များ၊ ဆရာဝန်သို့မဟုတ် သူ နာပြုများ၊ လူဦးရေထူထပ်ပြီး ပိတ်ဆို့ထားသောနေရာများဖြစ်သည့် အကျဉ်းထောင်များနှင့် မိဘမဲ့ ကျောင်းကဲ့သို့သော နေရာများတွင် နေထိုင်ရသူများ၊ ထကြွတီဘီရောဂါအဖြစ်များသော ဒေသတွင် နေသူများ သို့မဟုတ် အဆိုပါဒေသများသို့ ခရီးသွားလာခဲ့သူများဖြစ်ကြသည်။ အကယ်၍သင်သည် အဆိုပါသူများထဲတွင် အပါအ၀င်ဖြစ်ပါက အခြားသူများထက်ပို၍ ကူးစက်နိုင်ချေပိုများသောကြောင့် သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ရန် ပို၍လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၃) ကျန်းမာသောနေထိုင်မှုပုံစံသို့ ပြောင်းလဲပါ
ကျန်းမာသောသူများတွင် ကိုယ်ခံစွမ်းအားသည်လည်း မြင့်သောကြောင့် တီဘီရောဂါပိုးကို ခုခံ နိုင်စွမ်းလည်း မြင့်မားကြသည်။ ကျန်းမာသော နေထိုင်မှုပုံစံများဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်၍ မျှတသော အစားအစာကိုစားခြင်း၊ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း၊ အရက်လျှော့ သောက်ခြင်းနှင့် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်သင့်သည်။
တီဘီရောဂါကူးစက်မှုကို BCG (Bacille Calmette-Guerin) ဆေးအသုံးပြု၍ ကာကွယ်နိုင် သည်။ ယင်းဆေးကို တီဘီရောဂါကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် နိုင်ငံအတော်များများတွင် အသုံး ပြုကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ယင်းဆေးသည် ကလေးသူငယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည်။ လူကြီးများအတွက်မှာမူ ယင်းတို့သည် ကူးစက်နိုင်ချေများသူများ သို့မဟုတ် တီဘီရောဂါ သည်များနှင့် အမြဲထိတွေ့ဆက်ဆံနေရသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် ထကြွတီဘီရောဂါ ရှိသူ၏ မိသားစုများဖြစ်ပါက ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
တီဘီရောဂါသည် ထကြွတီဘီရောဂါရှိသူတစ်ယောက် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ စကားပြောခြင်းသို့မ ဟုတ် ရယ်ခြင်းကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသော အမှုန်များမှတဆင့် ကူးစက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် နှာခေါင်း နှင့် ပါးစပ်ကိုဖုံးအုပ်ထားသော မျက်နှာဖုံးတစ်ခုဝတ်ခြင်းက သင့်အား တီဘီရောဂါပိုးများကို ရှူသွင်းမိ ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ မျက်နှာဖုံးတစ်ခုကို အလွယ်တကူမရနိုင်လျှင် လက်ကိုင်ပ၀ါတစ် ထည်သို့မဟုတ် အခြားအလားတူပစ္စည်းတစ်ခုခုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(၆) လူထူထပ်သော နေရာများကို ရှောင်ရှားခြင်း
လူထူထပ်သော နေရာများတွင် ထကြွတီဘီရောဂါရှိသူများ အများအပြားရှိနိုင်သောကြောင့် ယင်းနေရာများကို ကူးစက်နိုင်ချေများသော နေရာများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ အဆိုပါနေရာများ ကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် တီဘီကူးစက်မှုကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရှောင်ရှား၍ မဖြစ်နိုင်ပါ က မျက်နှာဖုံးတစ်ခုသို့မဟုတ် အခြားအလားတူပစ္စည်းတစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် တီဘီရောဂါကူး စက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။